Clara Peñalver. Kubvunzana nemunyori weSublimation | Zvazvino Zvinyorwa
Clara Peñalver. Kubvunzana nemunyori weSlimlimation
Mifananidzo. Clara Peñalver. Facebook peji.
Clara Penalver munyori uye munyori wezvekugadzira. Nhoroondo yake yazvino ndeye Sublimation uye yakavakirwa pane yekutanga akateedzana e Nhau. Akakundwa ne Ropa uye ndiye musiki wenyaya dzakateedzana dze Ada Levy -Nzira yekuuraya nymph, Iwo mutambo wemakuva y Kutsemuka kweHourglass—. Mukuwedzera, anonyora zvakare mabhuku evana uye akabatana muwairesi neterevhizheni. Ndinokutendai zvikuru wakatsaurira shoma yenguva yako ku iyi hurukuro, pamwe nemutsa wake uye kutarisisa.
Clara Peñalver - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Sublimation Ndiyo Novel yako nyowani, yakabuda senge odhiyo nhepfenyuro. Chii chaunotiudza nezvazvo uye nezve kubata kwayo mune iyi fomati?
CLARA PEÑALVER: Sublimation inyaya yekuti akatambura akati wandei rombo rakanaka zvisati zvaitika. Kutanga, akazvarwa ari ramangwana rinonakidza nerufu senzvimbo yepamusoro uye shinda yakajairika. Pakutanga, paingova nenyaya imwe chete mumusoro mangu, isina kuumbwa, saka kana mukana wekunyora Nhau, Ndakafunga kuikwana mu mitemo yetiodhiyo akateedzana.
Zvese izvo pakati pekupera kwa2018 na2019.Pandakazopedza kusaina kondirakiti uye ndikatanga kushanda nenyaya yacho, 2020 yakauya uye, nayo, denda. Iyo Denda akandimanikidza kuita yakawanda shanduko munhoroondo, kunyanya zvine chekuita nedenda iri. Yangu nyaya yanga yakavakirwa pamhedzisiro iyo hutachiona hwaive nayo pasirese uye, apo ini ndanga ndave kutonyora SublimationZvese zvakangoerekana zvaitika, munhu wese anga achitora kosi yekupararira kuti hutachiona hunopararira sei, hunobuda sei kubva kudenda kuenda kudenda, uye kuti vanhu vanofanirwa kuchinjika zvakadii, kana kupotsa, kuenda kumamiriro ezvinhu akadaro. Ndainzwa kunge benzi ndichiudza vateereri venguva yemberi uye vaverengi chimwe chinhu chingatoziva zvirinani kupfuura zvandakaita pakaburitswa nyaya yacho, saka ndakagadzirisa.
Ndakabvisa zvese zvine chekuita nekutapurirana hutachiona, yezve kukanganisa kwayo pamunhu. Izvo zvakakonzera kuti mavara ayo mazhinji akure uye kuti vamwe vakaonekwa itsva, iyo, ingadai yakave iri dambudziko hombe munhoroondo, yakaguma yave, ipapo, kurohwa kwake kukuru kwerombo. Nyaya yacho yatove nane manje.
AL: Unogona kurangarira iro rekutanga bhuku rawaverenga iwe? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
CP: Ndinoyeuka bhuku rekutanga randakadya, a kugadzirisa kubva mubhuku raAgatha Christie Kuuraya paMabvazuva Express, rakagadziriswa naBarco de Vapor uye rakanzi Kuuraya paCanada Express. Ini ndinorangarira kuti ndakadya iyo novel, kuti ini ndaigara mune yega yega mapeji ayo, uye kuti, kubva ipapo, ndakatanga kudya bhuku rega rega rakawira mumaoko angu.
Nezve nyaya yekutanga yandakanyora, ngatitii, imwe yakati rebei nyaya chirongwa (nekuti ini ndanga ndanyora yakawanda yakaipa - yakaipa kwazvo - nhetembo uye dzakawanda pfupi nyaya), ini handirangariri zita racho, asi raive naka ngano nezvemusikana akangoerekana aenda kune imwe ndege kwaaive akabatanidzwa muhondo pakati poumambo uye ... zvakanaka, chimwe chinhu chakanyanya. Ini ndinofunga ndizvozvo makore gumi nematanhatu uye kuti pamwe naye vakandipa iyo kuziva munharaunda mumakwikwi enyaya eguta rangu. Ndiyo yaive nguva yekutanga kuti ndive mupepanhau.
AL: Munyori mukuru? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras.
CP: Chokwadi ndechekuti ndine vazhinji vanyori vemusoro, uyezve, ivo vanochinja zvichienderana nebhuku randinozviwana ndinaro, padanho rekunyora ini randinoreva.
Semuenzaniso, ne Sublimation, Philip K. Dick naGeorge Orwell vaive vanyori vangu vakuru. Zvakanaka, ivo vaviri uye munyori we Zhizha iro mai vangu vaive nemaziso akasvibira, Tatiana Țîbuleac, yeiyo rondedzero manyorerwo akapfuma uye agile anoratidza mutongo mushure memutsara. Ndakafarira bhuku rake rekutanga rakaburitswa muno muSpain zvekuti ndakatadza kubatsira asi kuzvitumidza ndega Sublimation.
Nenhau yazvino, vanyori vangu vanyori Martin Amis, Amelie Nothomb (Ndinodzokera kwaari zvakawandisa, kunyanya kwaari Metaphysics yemachubhu) uye Ernesto Sabato.
CP: Pasina kupokana ishe Ripley, waPatricia mukuru Highsmith. Ndiri kufarira kwazvo, ndoda kupenga, dislocations dzepfungwa dzevanhu, uye Highsmith ainyanya kugona pane izvi.
CP: Panguva yekuverenga kwete.
Panguva yekunyora ini ndine yakanaka yakanaka yekuvaraidza, kubva Ndirwirei nematanga kana minhenga, kana rimwe zuva ndisina kubereka zvakakwana nazvo, kusvikira ndada tafura yangu ive yakachena kana iri muhofisi kwandiri kuenda kunoshanda. Zvakare Ndinonyora neruoko, mu Mapepa emabhuku emabhuku anonyorwa akasarudzika nyaya yega yega, ingangove iri pakati peyakanaka tsika uye simbi mania.
CP: Kana zvakadaro leer, kana ndine bhuku repepa, ndinofarira kuzviita pamubhedha kana pamubhedha; dzimwe nguva zvakare mune vamwe cafeteria. Kana ini ndichiteerera, Ndokunge, kana ndiri kuteerera kune audiobook kana odhiyo nhevedzano, Ndinozviita zuva rese, pandinenge ndichichengeta mwana wangu, ndichigadzira, ndichifamba mumugwagwa, ini ndichiita zvekutenga. Muchidimbu, chero nguva kana panguva ipi neipi basa risingade kuedza kwehungwaru. Zvinoreva kuti kana ndikatadza kuverenga zvinyorwa zviviri pabepa pamwedzi, kuvateerera ini ndinogona kudya matatu kana mana mabhuku pasvondo, chimwe chinhu chinondifadza kwazvo, uye icho chinondibvumidza kunakidzwa namabhuku neimwe nzira.
AL: Kune mamwe marudzi aunoda?
CP: Chaizvoizvo, ini ndiri kondoni furu ye rondedzero yemazuva ano. Ndakaverenga chete thriller kana novel Mapurisa apo ini ndisinganyore uye kundivaraidza, kanenge kasingambovi sosi yekudzidza.
CP: Zvino ini ndichangopedza Invisible, ivo Paul auster, Ndave kuda kuenda kunovhura nhorowani nemunyori mumwe chete, Jump yekuuraya, ine autobiographical pamusoro. Neniwo kunyudzwa mukunyora yangu inotevera thriller, zvakanyanya muchimiro chemanoja aAda Levy kupfuura Manzwi aCarol o Sublimation, zvinoreva kuti iri Inonakidza iyo yandinotyora mirau yese ndaifanira kuva nazvo. Iyo inoverengeka yandinotarisira kupedzisa, uye kuendesa, muna Gunyana.
KU: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa chiri sei? Iwe unofunga kuti zvichachinja here kana kuti zvakatoita saizvozvo nemafomu matsva ekugadzira kunze uko?
CP: Zvakanaka, ndinofunga chiitiko chekutsikisa chiri zvakanyanya kufadza kupfuura nakare kose. ari chikamu Iri bhuku rechinyakare rakaratidza panguva yedenda iro ichine simba kuenderera mberi, kunyangwe zviri pachena neshanduko uye kuwanda kuchinjika kunguva. Iyo chimiro chitsva mukati memunda wezvinyorwa, ini ndinoreva Audio, iri kutiratidza kuti kuverenga uku uye kunakirwa zvakanyorwa zvekunyepedzera hakusi kungopedzwa chete, asi iri kuwedzera.
AL: Inguva yedambudziko ratiri kusangana nayo iri kukuomera here kana iwe unozogona kuchengeta chimwe chinhu chakanakira nyaya dzeramangwana?
CP: Ngatione, ini handisi kuzokuudza kuti zvaive nyore, basa rangu rakakanganiswa zvakanyanya, kunyanya mumabasa andagara ndichiita kunze kwekunyora. Nekudaro, ini ndawana zvinhu zvakawanda zvakanaka kubva mudenda, kutanga, mwanasikana uye hukama hwakakosha nemumwe wangu.
Uye zvakandibatsirawo gadzirisa odha yangu yezvinokosha, uye kuzvitungamira munzvimbo yebasa kune zvinangwa zvinogutsa zvakanyanya, kwete nyore, asi zvinozorodza uye zvinonakidza. Zvinoreva kuti hongu Ini ndinowana zvinhu zvakanaka mune zvese izvi. Dai ndisina, ndingadai ndakarega kuva ini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Clara Peñalver. Kubvunzana nemunyori weSlimlimation